Stiff banyere Morning? Nke a bụ ihe kpatara!
16 / 08 / 2016 /0 Comments/i quality Articles/av ewute
Ọ dịghị ọkwa
Nnyocha e bipụtara n'akwụkwọ akụkọ nyocha FASEB egosila na enwere ihe ijuanya kpatara mmadụ na-esikarị ike n'anụ ụtụtụ-ya bụ na arụrụ arụ nke '' biological clock '' na-emepụta ma wepụta protein mgbochi mkpali a na-akpọ. Cryptochrome nke na - egbochi mmụọ mmeghachi omume / mkpali n'abalị.
Mkpụrụ protein a egosipụtawo mmetụta mgbochi mkpali na ọmụmụ in vitro ma nye ohere ọhụụ maka mmepe nke ọgwụ rheumatism. Nke a na-egosikwa otú ahụ si edozi ọrụ ya dabere na ụda nke ụbọchị na otu ezigbo ụra abalị si dị mkpa maka mgbake nke akwara na nkwonkwo - yana mgbochi ọrịa. Have nwere ntinye? Jiri ogige ikwu okwu n'okpuru ma ọ bụ nke anyị Facebook Page - enwere ike ịchọta ihe omumu nyocha nile na njikọta na ala nke ihe ederede.
Ihe nchoputa n’ime nyocha a nwekwara otutu ihe ikwu maka mmepe nke ogwu ohuru maka ọrịa rheumatic - dị ka ogbu na nkwonkwo ma ọ bụ ọrịa ogbu ogbu na nkwonkwo.
Ihe kpatara isi ụtụtụ ụtụtụ
Isi ike ụtụtụ bụ n'ihi eziokwu na ahụ ahụ lụsoro mmeghachi ọkụ na -adịghị mma / mkpali mkpali n'abalị niile - nke na -ahapụ ụfọdụ mpaghara emetụtara maka ịdị ọcha site na mgbasa ọbara. Mgbe ị na -akwagharị, mgbasa ọbara gị na -abawanye wee were “ihe fọdụrụ” ndị a ka agha nke abalị gachara wee jiri nke nta nke nta nwekwuo nghọta na mgbanwe. Karịsịa ndị nwere ọrịa ogbu na nkwonkwo na -emetụta isi ụtụtụ a. Iji nwalee nke a, ndị nchọpụta weere ihe nlele anụ ahụ sitere na nkwonkwo, akpọrọ fibroblast synoviocytes, nke amaara na ọ bụ akụkụ dị mkpa na ọrịa nkwonkwo mkpali. Mkpụrụ ndụ ndị a nwere mgbagharị circadian dị awa 24, a chọpụtakwara na site na itinye aka na usoro a, mmadụ nwere ike wepu ọrụ nke cryptochrome protein - nke nyere ntọala maka mmụba mbufụt / nzaghachi mkpali. Site na ịmalitegharị protein a kpọtụrụ aha ọzọ - site na ọgwụgwọ ọgwụ - a hụrụ na mbufụt belatara ọzọ. Nke gosiputara mkpa protein a. PS - N'ezie, ọnya ụtụtụ na -emetụtakwa ibu ahụ na ihe akpọrọ «NDỊ»Ọzọkwa.
Nwere ike ịnye ọgwụ ọgwụ kachasị dị irè maka ọrịa nkwonkwo na-enye nsogbu
Ọmụmụ ihe ahụ nwere ike iduga n'ọganihu n'ihe metụtara ọgwụgwọ ọgwụ dị irè karị, ọ nwere ike ibute mgbanwe na oge nke ụbọchị a na-enye ụdị ọgwụ a - iji nwee ezigbo nsonazụ. Ihe nchoputa nke nyocha a nwere ike inwe otutu ihe ikwu banyere ndi emetuta rheumatism.
Nnyocha dị mkpa ma na -atọ ụtọ. Ọmụmụ ihe a na -ekwusi ike n'ụzọ ọzọ na e kere mmadụ ka ọ hie ụra n'abalị nakwa na enwere "agha" dị ukwuu na ahụ megide mbufụt n'oge a. Ihe nwere ike ịbara ama ma ọ bụrụ na ị na -arụ ọrụ ọtụtụ oge abalị wee chee na nke a na -eme ka ị sie ike ma nwee nkụda mmụọ - ikekwe ọ metụtara mmụba na -abawanye n'ahụ na nkwonkwo. Nnyocha ndị gara aga gosikwara na ọgba aghara nke mgbagharị circadian (gụọ: mgbanwe abalị na ihe ndị yiri ya) nwere njikọ chiri anya na ọrịa kansa na ọrịa strok. (Ihe nchịkọta akụkọ: Ọmụmụ ihe site Papagiannakopoulos et al, 2016). Ma ọ bụghị ya, a maara site n'oge gara aga na mmega ahụ na ezigbo nri na-enyekwara aka ịlụso nsogbu nkwonkwo ọgụ - yabụ echefula njem ụbọchị ọ bụla ma ọ bụ oge ọzụzụ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịgụ ihe ọmụmụ niile, ị ga-ahụ njikọ na ala nke isiokwu ahụ.
Enwere ike ịkekọrịta isiokwu a na ndị ọrụ ibe, ndị enyi na ndị enyi. Ọ bụrụ na ịchọrọ edemede, omume ma ọ bụ ihe ndị yiri ya zitere dị ka dọkụmentị nwere ugboro ugboro na ihe ndị yiri ya, anyị na-ajụ gị dị ka ma banye site na Facebook inweta ya. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, kwuo naanị ederede na ịkpọtụrụ anyị (kpamkpam n'efu) - anyị ga - eme ike anyị niile iji nyere gị aka.
Gụọ kwa: - 4 Mgbatị usoro dị na Stiff Back
Isiokwu dị iche iche: - Ọgwụ Alzheimer ọhụrụ weghachite ọrụ ebe nchekwa zuru oke!
MEGOD TH IHE A: - Mmega 6 megide Sciatica na ciaticgha Sciatica
Ị maara: - Ọgwụ oyi nwere ike inye mmerụ ahụ mgbu na nkwonkwo mgbu? Tinyere ihe ndị ọzọ, Ihe nraghachi azụ (ị nwere ike ịtụ ya ebe a), nke mejupụtara ọkachasị nke ngwaahịa sitere n'okike, bụ ngwaahịa ama ama. Kpọtụrụ anyị taa site na ibe Facebook anyị ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ma ọ bụ chọọ ntuziaka.
- want chọrọ ịmatakwu ma ọ bụ nwee ajụjụ? Jụọ ndị ọrụ nlekọta ahụike ruru eru na-akwụ ụgwọ ozugbo (na-akwụghị ụgwọ) site n'aka anyị Facebook Page ma ọ bụ site na anyị «AJ --J G - Zaa azịza!"-kọlụm.
VONDT.net - Biko kpọọ ndị enyi gị ka ha nwee mmasị na saịtị anyị:
Anyị bụ otu free ọrụ ebe Ola na Kari Nordmann nwere ike ịza ajụjụ ha gbasara nsogbu ahụike akwara - kpamkpam amaghị ama ma ọ bụrụ na ha chọrọ.
Nkeji edemede: Elekere circadian na-achịkwa ọrịa ogbu na nkwonkwo, Laura E. Aka, Thomas W. Hopwood, Suzanna H. Dickson, Amy L. Walker, Andrew SI Loudon, David W. Ray, David A. Bechvidence, na Julie E. Gibbs, FASEBJ, doi: 10.1096 / fj.201600353R, nke edepụtara na ntanetị August 3, 2016.
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/Stiv-rygg-om-morningen-i-sengen.jpg?media=1648573622 466 700 ewute https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 ewute2016-08-16 12:19:572022-03-18 17:27:32Stiff banyere Morning? Nke a bụ ihe kpatara!
Usoro ọgwụgwọ anụ ahụ nwere ike iwepụ Ọgwụ Ike Ọgwụ 7 Mgbatị megide Ọgba Ogbenye